GoldenHour inotibatsira kuona yakanakisa nguva nenzvimbo yekutora mifananidzo yakanaka | IPhone nhau
GoldenHour inotibatsira kuziva kuti ndeipi nguva yakanakisa nenzvimbo yekutora mifananidzo yakanaka
Chinhu chitsva icho chitsva icho iPhone 7 Plus yatiunzira chine chekuita nekamera, iyo mbiri kamera iyo yekutenda kune software yeIOS, inotibvumidza isu kuti tigadzire yakanakisa portraits ine iyo yekumashure kunze kwekutarisa. Kwechinguva ikozvino, vashandisi vazhinji vafunga kuisa macamera macomputer padhuze uye vanongotarisa chete pakushandisa smartphone kamera, nekuti zvishoma kana zvishoma uye nekuponesa madaro, ivo vanotipa isu zvakafanana mhando. Zvisinei, kushandiswa kweDSLR makamera kwavewo kuve kwakakurumbira kwazvo mumakore achangopfuura, kunyangwe kwenguva yakati rebei zvinoita sekunge kufarira kwadzikirawo.
DSLR makamera anotengeswa zvakazvimiririra, kunyangwe isu tichigona kuwana mapakeji anosanganisira lens yemhando inopfuura yakasarudzika asi kutanga nezvakakwana. Kana iwe uchida kutora mifananidzo, isu chokwadi tinoziva mazwi ebhuruu awa neawa yegoridhe. Mazwi ese ari maviri anoreva maawa akasarudzika mukati mezuva rese ratinogona kutora mukana wekupenya kwezuva kuti tiwane mibairo yakanaka, kungave neiyo DSLR kamera, compact camera kana iyo kamera kamera, kunyangwe mune yekupedzisira kesi mhedzisiro yacho haisi nguva dzose zvinogutsa.
Mufananidzo: Flickr Jimflix!
Kune vese avo vashandisi vanofarira kutora mifananidzo uye vasingade kuziva nezve yebhuruu awa kana iyo yegoridhe awa, iyo GoldenHour app yeIOS ndiyo mhinduro. Ichi chishandiso chinotizivisa nezvenguva iyo iyo yegoridhe awa inotanga (mune iyo mifananidzo inotora yero yeruvara) uye nebhuruu awa, iyo nguva iyo iyo denga rinoshandura rakasimba bhuruu ruvara uye iro rinotipa isu inoyevedza mhedzisiro. Uye zvakare, chishandiso ichi chinotizivisawo kwatinofanira kuenda kuti tiwane migumisiro yakanaka, sezvo zuva risingagare richibuda kana kuvanda panzvimbo imwechete.
Mufananidzo: Flickr Zexsen Xie
Kugona kutipa iyi data, GoldenHour inoshandisa iyo GPS yeyedu kifaa, saka tinogona kuishandisa chero kupi zvako pasi. Izvo zvinotorawo kufunga nezve mamiriro ekunze ekuverenga nguva yakatarwa kuti tikwanise kubuda uye titore mifananidzo yedu kutora mukana webhuruu awa uye iyo yegoridhe awa. Kana iwe uchida kutora mifananidzo uye uine DSLR kamera, iyi application yakakunakira iwe. Kunyanya, ndanga ndichiiyedza kwemwedzi mishoma uye ndinofanira kubvuma kuti zvakanaka kushandisa maawa anodiwa, anotisiya nemhedzisiro inoshamisa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » GoldenHour inotibatsira kuziva kuti ndeipi nguva yakanakisa nenzvimbo yekutora mifananidzo yakanaka
Maitiro ekudzimisa maviri-chinhu kusimbiswa kweako Apple ID
Pokémon GO ++ 1.21.2, vhezheni nyowani yeakakurumbira kubira, iko zvino kwave kuwanikwa kweIOS